तीन कम्पनीको हकप्रद सेयरपछिको मूल्य समायोजन ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
तीन कम्पनीको हकप्रद सेयरपछिको मूल्य समायोजन !
काठमाडौ । मंगलबार तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले एकैदिन सिद्धार्थ बैंक, पूर्णिमा विकास बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो ।
नेप्सेले सिद्धार्थ बैंकको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । बैंकको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५३८ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ६३९ रुपैयाँ रहने भएको छ ।
त्यस्तै नेप्सेले माछापुच्छ्रे बैंकको १२ प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३८० रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ४३३ रुपैयाँ रहेको छ ।
मंगलबार नेप्सेले पूर्णिमा विकास बैंकको २५ प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३४० रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ३६२ रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ १६
भरतपुरबाट मात्रै बाइस अर्ब राजश्व संकलन
चितवन । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गत आर्थिक वर्षमा रु २१ अर्ब ८० करोड ४५
एक्कासी शेयर बजार दोहोरो अंकले बढ्यो
काठमाडौँ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड नवौँ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । आठौँ बर्ष पूरा
मेगा बैंक नवौँ बर्षमा प्रवेश, बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने गरी…